WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato Liiska Ciyaartoyda Koox Kasta Oo Premier Leaque-ga Ah Si Xor Ah Kaga Bixi Kara Bisha Soo Socota Iyo Shaxda Ugu Fiican Ee Xidigahan Laga Sameeyay. - Laacib.net
WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato Liiska Ciyaartoyda Koox Kasta Oo Premier Leaque-ga Ah Si Xor Ah Kaga Bixi Kara Bisha Soo Socota Iyo Shaxda Ugu Fiican Ee Xidigahan Laga Sameeyay.
Muddo bil ka yar ayaa ka hadhsan xili ciyaareedkan waxayna kooxuhu isku diyaarinayaan kulamada ugu danbeeyay ee ay xili ciyaareedkan ku soo gabagabayn lahaayeen. Horyaalka Premier Leaque-ga wax kasta waa la go’aamiyay oo aan ka ahayn tartanka loogu jiro kaalinta saddexaad iyo afraad. Waxaa haddaba la ogyahay saddexda kooxood ee heerka labaad u dhacay oo kala ah Sunderland, Middlesbrough iyo Hull City.
Waxa kale oo la ogyahay in Chelsea ay koobka Premier Leaque-ga hanatay isla markaana ay iyada iyo Tottenham kaalinta kowaad iyo labaad ugu soo kala baxeen Champions Leaque-ga, waxaana sidoo kale la ogyahay in Manchester United ay kaalinta lixaad ku dhamaysanayso. Laakiin waxaa hadhsan in maalinta ugu danbaysa lagu go’aamiyo kooxaha kaalinta saddexaad iyo afraad buuxin doona waxaana ku tartamaya Man City, Liverpool iyo Arsenal.
Haddii aan intaa ku soo dhaafno xogta guudmarka ah ee Premier Leaque-ga waxaa jira qorshaha koox kastaaba ay u sii diyaarsanayso suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee dhawaan furmi doona, waxaana jira ciyaartoy kooxo laga samayn karo oo dhamaadka xili ciyaareedkan si xor ah kaga bixi doona kooxahooda haddii ayna waqti dhaw heshiisyo cusub ka saxiixan.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa liiska ciyaartoyda ay heshiisyadoodu dhacayaan dhawaan ee sida xorta ah ku bixi kara haddii ayna qandaraasyo cusub saxiixn. Waxa kale oo dhamaadka qormadan aad ku arki doontaa shaxda ugu fiican ee laga sameeyay ciyaartoyda xorta ah ee bilaashka lagula wareegi karo. Kooxuhu waxay u soo kala horeeyaan sida xafarka magacoodu ku bilawdaa u kala horeeyo.
Ma Jiro hal ciyaartoy oo si xor ah kaga bixi kara oo heshiiskiisu dhacay.
Kooxda Tottenham oo kaliya ayaa ah kooxda haysta ciyaartoy aanu heshiiskoodu dhacayn dhamaadka xili ciyaareedkan waxayna inta badan haystaa koox ciyaartoy mustaqbal wayn leh oo ay waliba inta ugu badan ka saxiixatay heshiisyo waqti dheer ah.
Kooxaha Manchester City, Sunderland iyo Crystal Palace ayaa ka mid ah kooxaha nadiifinta wayn samayn doona dhamaadka xili ciyaareedkan. Laakiin magacyada waa wayn ee sida Yaya Toure, Zlatan Ibrahimovic,Santi Cazrola, Michael Carrick iyo Lucas ayaan wali la ogayn haddii heshiisyo cusub oo waqti kooban ah laga saxiixi doono .
Haddaba halkan kaga bogo shaxda ugu fiican ee laga sameeyay liiska ciyaartoyda ay heshiisyadoodu dhacayaan dhawaan ee sida xorta ah lagu heli karo.